Tourism & Leisure Yepakati-Border Mari Yekubhadhara Mhedzisiro Mari inosvika $ 1.5 Bhiriyoni Muna Q2 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Bhizinesi Kufamba » Tourism & Leisure Yepakati-Border Mari Yekubhadhara Mhedzisiro Mari inosvika $ 1.5 Bhiriyoni Muna Q2 2021
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Tichifananidza kuyambuka muganhu madhiri ekukosha mumatunhu akasiyana epasi, Europe yakabata chinzvimbo chepamusoro, nemaziviso akaziviswa akakosha madhora bhiriyoni panguva.
$ 650 miriyoni yekutsigira mari yeFlixMobility iri pamusoro pechinyorwa.
Germany yakakwira pamusoro pechinyorwa maererano nemutengo wekutenga pamadhora mazana manomwe nemakumi manomwe nemakumi maviri nematatu emadhora.
Iyo yepamusoro nyika maererano nemuchinjikwa muganho mari yekudyidzana inobata zviitiko muQ2 2021 yaive France.
Yese yekushanya & yekuvaraidza indasitiri yekuyambuka muganho mari yekudyidzana madhiri anokosha emadhora 1.5bn akaziviswa pasirese muQ2 2021, inotungamirwa ne $ 650m yekudyidzana mari ye FlixMobility.
Iko kukosha kwakaratidza kuwedzera kwe 421.4% kupfuura iyo yapfuura kota uye kukwira kwe509.4% kana ichienzaniswa neyekupedzisira-kota yevhareji, iyo yakamira pa $ 242.88m.
Tichifananidza macross border border madhiri munzvimbo dzakasiyana dzepasi, Europe yakabata chinzvimbo chepamusoro, nemaziviso akaziviswa madhora anosvika $ 1bn munguva. Padanho renyika, Germany yakasimudza runyorwa maererano nemutengo wekutenga pamadhora mazana manomwe nemakumi manomwe nematatu emadhora.
Panyaya yemavhoriyamu, Europe yakabuda senzvimbo yepamusoro yezvekushanya & yekuvaraidza indasitiri kuyambuka muganho mari yekudyidzana inobata pasi rose, ichiteverwa neAsia-Pacific uyezve North America.
Nyika yepamusoro maererano nemuchinjikwa wemuganho wezvemari wekubata mari muQ2 2021 yaive France ine zvibvumirano zvitatu, ichiteverwa neGerman nematatu uye India nematatu.
Muna 2021, kumagumo, miganhu yekuyambuka mari yekudyidzana inoita madhora 1.5bn yakaziviswa pasi rose mukushanya & indasitiri yekuzorora, zvichiratidza kuderera kwe243.1% gore pagore.